Umbhede wenkosi othokomele obekwe enhliziyweni ye-COMO! - I-Airbnb
Umbhede wenkosi othokomele obekwe enhliziyweni ye-COMO!
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Elizabeth
Ngo-57 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
Igumbi elithokomele elinombhede wenkosi kanye nama-closets amabili! Indawo ephambili ibekwe phakathi nohambo olufushane oluya eColumbia College, eMizzou kanye nenkundla yebhola, iStephens College, iLogboat Brewery kanye nazo zonke izindawo zokudlela kanye nezitolo zedolobha. I-Boone Hospital nayo ingamabhulokhi ama-2 ukusuka emnyango ongaphambili. Ukuhamba ngebhayisikili i-Katy Trail nakho kulula ukusuka lapha - vele ugibele amabhayisikili akho amabhulokhi ambalwa ukuze ufinyelele ukufinyelela kwe-Katy Trail epaki ye-Flat Branch. Amabhayisikili angase agcinwe ngaphakathi uma kudingeka.
I-chateau iyikhaya elihle lezitini elinephansi lezinkuni langempela, i-wood trim kanye nomnyango wesiFulentshi. Kukhona umpheme omuhle obonisiwe ngaphambili onendawo yokuhlala encane kanye nompheme ongemuva otholakala ukuthi uhlale kuwo. Ukubhema kuvunyelwe ngaphandle kuphela.
I-wifi esheshayo – 57 Mbps
4.86 · 225 okushiwo abanye
Benton Stephens endaweni etholakala phakathi nohambo olufushane kuyo yonke into oyidingayo. Ngaphesheya komgwaqo kunegalaji likaphethiloli ukuze ukwazi ukufinyelela izinsiza ozikhohliwe, ukudla neziphuzo. I-jaunt esheshayo ngaphesheya komgwaqo i-Logboat Brewery futhi ungaphakathi kohambo lwemizuzu engama-20 ukuya enkundleni yebhola e-Mizzou egudle umhubhe we-College avenue. Isibhedlela iBoone singamabhulokhi ama-2. Columbia College futhi 2 amabhlogo kanye Stephen's College 1 block. Kukhona indawo yokupaka eningi ngaphandle komgwaqo ngemuva kwendlu.
Ngisebenza esibhedlela 2 blocks away. Uma ngisekhaya, ngizoba sendaweni ephezulu isikhathi esiningi.